Baiboly pejy 699 - Ny Baiboly
Voalohany < 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 Manaraka Farany
1 Piera toko 4 (tohiny)
2mba tsy handaniany ny andro sisa hiainanay amin'ny nofo, araka ny danin'ny kibon'olombelona intsony, fa araka ny sitra-pon'Andriamanitra. 3Ampy ny nanarahanareo ny fanaon'ny jentily fahizany, izay nanarananareo fo tamin'ny fitondran-tena ratsy, fanirian-dratsy, fimamoana, fihinanana amam-pisotro tafahoatra, ary ny fanompoan-tsampy mahameloka indrindra. 4Gaga izy ireo izao, fa tsy miara-manaram-po aminy amin'ny ratsy hianareo, ka manozona no ataony. 5Nefa hampamoahan'ilay vonon-kitsara ny velona sy ny maty izy. 6Fa izany no nitoriana ny Evanjely tamin'ny maty koa, dia mba ho velona araka an'Andriamanitra izy amin'ny fanahy, rahefa notsaraina araka ny fomban'ny olona amin'ny nofo.
12Ry malala, aza gaga amin'izany toa afo nirehitra tao aminareo ka nanjò anareo ho fitsapan-toetra, na mihevitra izany ho zavatra tsy fahita; 13fa mifalia arakaraka ny iombonanareo fijaliana amin'i Kristy, mba hanananareo anjara amin'ny fifaliana sy firavoravoana koa amin'ny andro hisehoan'ny voninahiny 14Sambatra hianareo raha tevatevaina noho ny anaran'ny Kristy, fa mitoetra ao aminareo ny Fanahin'ny voninahitra sy ny fahefana, dia ny Fanahin'Andriamanitra. 15Aoka tsy hisy mijaly ao aminareo noho izy mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpitsiriritra fananan'olona; 16fa raha noho izy kristianina kosa no ijaliany, dia aoka tsy ho menatra amin'izany izy, fa vao mainka hanome voninahitra an'Andriamanitra aza, noho izany anarana izany. 17Fa indro tonga ny andro hiantombohan'ny fitsarana amin'ny fianakavian'Andriamanitra, ka raha miantomboka amintsika izany, hanao ahoana kosa no hiafaran'izay tsy mino ny Evanjelin'Andriamanitra? 18Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, inona no hanjò ny tsy mivavaka sy ny mpanota? 19Koa izay miaritra fahoriana araka ny sitra-pon'Andriamanitra, aoka hanolotra ny fanahiny amin'ny fanaovan-tsoa, ho azy Mpahary tsy mivadika.
1 Piera toko 5
Ny adidin'ny mpifehy sy ny fehezina - Anatra iombonana - Fanaovam-beloma.
1Mihanta amin'ny Pretra eo aminareo aho, dia izaho izay Pretra toa azy koa, sy vavolombelon'ny fijalian'ny Kristy, ary mpiombona amin'ny voninahitra izay haseho koa: 2fahano ny ondrin'Andriamanitra napetraka hiandraiketanareo; aoka hianareo hitandrina azy ireo, tsy an-terivozona fa an-tsitra-po araka an'Andriamanitra; tsy amim-pitiavam-bola fa an-jotom-po; 3tsy amim-pizakazakana ny Eglizy, fa amim-pisehoana ho fakan-tahaky ny ondry; 4ka rahefa miseho ilay Filohan'ny mpiandry, dia handray satro-boninahitra tsy mety simba hianareo.
5Ary hianareo mbola tanora kosa, maneke ny Pretra. Samia misikina fanetren-tena hianareo ka mifanompoa, fa manohitra ny mpiavonavona Andriamanitra, ary manome fahasoavana ny manetry tena. 6Koa manetre tena eo ambanin'ny tàna-maherin'Andriamanitra àry, mba hanandratany anareo amin'ny andro voatendriny; 7apetraho aminy ny fiahianareo rehetra, fa izy no miahy anareo.
8Mahalalà onony, ary miambena; fa ny demony fahavalonareo mihaodihaody manodidina anareo mova tsy ny liona mierona mitady izay harapany. 9Tohero izy, miorena mafy amin'ny finoana, fantaro fa miaritra fahoriana toraka izany koa ny rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo izao.
10Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra, izay niantso anareo ho amin'ny voninahiny mandrakizay, no handavorary sy hampiorina ary hanamafy anareo, rahefa miaritra kelikely hianareo. 11Ho azy irery anie ny voninahitra amam-pahefana mandrakizay. Amena.
12Amin'ny alalan'i Silvano izay rahalahy mahatoky fantatro tsara fa ahy, no anoratako ho anareo ireo teny vitsivitsy ireo mba hilaza aminareo sy hampatoky anareo fa ny fahasoavan'Andriamanitra marina tokoa no iorenanareo. 13Manao veloma anareo ny Eglizin'i Babilona, voafidy toy anareo, sy Marka zanako. 14Mifampiarahabà amin'ny fifanoroham-pitiavana.
Ho aminareo rehetra izay ao amin'ny Kristy Jesoa anie ny fiadanana. Amena.
2 Piera toko 1
Soa lehibe no azontsika ka aoka hikezaka amin'ny hatsaram-panahy - Ny antony anoratany.
1Simona Piera, mpanompo sy Apostolin'i Jesoa-Kristy, mamangy an'izay nahazo ny finoana saro-bidy toa anay, noho ny fahamarinan'i Jesoa-Kristy Andriamanitra Mpamonjy antsika: 2Hitombo ao aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesoa Tompontsika.
3Ny herin'izy Andriamanitra no nanome antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny fitiavam-bavaka, fa izy no nampahalala antsika tsara an'ilay niantso antsika noho ny voninahiny sy ny fahatsarany; 4dia noho ireo koa no nanomezany antsika ny zava-dehibe sy sarobidy indrindra nampanantenaina antsika, mba ho tongan'izany ho mpiombona amin'ny fomban'Andriamanitra hianareo, rahefa afaka tamin'ny fahalòvan'ny filan-dratsin'izao tontolo izao. 5Ka noho izany, aoka kosa hianareo hikely aina fatratra, ka ny finoanareo asio hatsaram-panahy; ny hatsaram-panahy, fahalalana; 6ny fahalalana, fahalalana onony; ny fahalalana onony, fandeferana; ny fandeferana, fitiavam-bavaka; 7ny fitiavam-bavaka, fitiava-namana; ny fitiava-namana, fiavana an'Andriamanitra.
8Fa raha manana avokoa ireo zavatra ireo hianareo, sady manam-be, dia tsy havelan'ireo ho malaina na tsy hahavokatra ho amin'ny fahalalana tsara an'i Jesoa-Kristy Tompontsika. 9Fa izay tsy manana an'ireo kosa dia jamba sy tsy mahajery lavitra ary manadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny. 10Koa amin'izany, ry rahalahy, mikeleza aina kokoa mba handraikitra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo amin'ny fanaovan-tsoa; fa raha manao izany hianareo, dia tsy hivaona na oviana na oviana. 11Ary amin'izany dia homena fidirana malalaka amin'ny fanjakan'i Jesoa-Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika hianareo.
12Noho izany, hazoto mampahatsiaro anareo an'izany zavatra izany mandrakariva aho, na dia efa mahalala sy miorina mafy amin'ny fahamarinana efa ao aminareo aza hianareo. 13Ataoko fa raha mbola amin'ity tranolay ity koa aho, dia adidiko ny mamoha anareo amin'ny fananarana, 14satria fantatro fa akaiky ny hialako amin'ny tranolaiko araka izay nambaran'i Jesoa-Kristy Tompontsika tamiko, 15ka hanao izay zakako aho, mba hahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rahefa lasa aho.
16Fa tsy nanaraka angano tsara lahatra foana izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery amam-pahatongavan'i Jesoa Kristy Tompontsika, fa tena nahita maso ny fiandrianany tokoa. 17Endrey izany haja amam-boninahitra nomen'Andriamanitra Ray azy, raha tonga teo aminy ilay feo avy tamin'ny voninahitra lehibe nanao hoe: Ity no Zanako malalako izay sitrako indrindra. 18Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay.
Pejy: Voalohany < 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3370 seconds